Wiricheya Simudza Vagadziri & Vanopa | China Wiricheya Lift Fekitori
Kukwirisa wiricheyaDhizaini yakasarudzika yevakaremara vanhu uye vakaremara vanosimudza vanogona kukubatsira vanhu vakaremara ava kukwira masitepisi zviri nyore. Iyo michina inotora yakangwara kudzora system, yakawanda-mativi, modular, uye networked control system iyo inogona kugadzirisa data kusekesa, ichiita iyo erevheta oparesheni system kuti igadzikane.
China Wheelchair Lift Supplier Residential Use nehupfumi Mutengo
Iyo yekumira yewiricheya inokwidziridzwa yakagadzirirwa vakaremara, izvo zviri nyore kuti mawiricheya kukwira nekudzika masitepisi kana pamusoro pematanho ekupinda pamusuwo. Panguva imwecheteyo, inogona zvakare kushandiswa senge diki yekumusoro imba, inotakura kusvika kune vatatu vafambi uye inosvika kune: kukwirira kwe6m.
Kana yako yekuisa saiti isina nzvimbo yakakwana yekumisa yakamira yewiricheya kusimudza, saka iyo scissor mhando wheelchair simudza ichave yako yakanyanya kunaka sarudzo. Inonyanya kukodzera kushandiswa munzvimbo dzine mashoma ekuisa masosi. Inofananidzwa nekusimudza wiricheya wiricheya, Iyo scissor wheelchair
Panguva imwecheteyo, magineti anogara achienderana asingachinjiki mushini anoshandiswa, izvo zvinovandudza mashandisirwo echivako uye nekumhanyisa kuita kwerifiti. Magetsi emagetsi anokwanisa kugadziridzwa uye akaenzana zvinoenderana nemutengi wemuno magetsi. Iyo yakavakirwa-mukati disc bhureki inoita kuti opareta ishande yakachengeteka, iro vhoriyamu idiki pane yechinyakare main injini pasi peiyo imwechete mutoro, uye yakasimbiswa kubereka hakudi girisi lubrication. Kana iwe uchida iyi yakaremara simudza, ndapota tipe isu iyo chaiyo tafura saizi, mutoro uye kukwirira parameter, pamwe neicho chaicho mapikicha enzvimbo chaiyo yekuisirwa nzvimbo, uye isu ticharonga vehunyanzvi vagadziri kuti vagadzire uye vagadzirise zvinoenderana nezvinodiwa zvako chaizvo.